April 24, 2010 7:16 am
वाइसीएलको अर्धसैनिक संरचना भंग हुने
एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलहरु माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न सहमत भए आफू वाइसीएलको अर्धसैन्य संरचना भंग गर्न तयार हुने बताएका छन् । त्यसो हुन सके अझै पनि जेठ १४ भित्र संविधान जारी हुनसक्ने उनको दाबी छ । गज्जब छ, मुलुकले संविधान जारी हुन नसक्ने भनेर विकल्पका कुरा गर्न थालिसके, यताको कुरो अर्कै छ ।
नयाँ सरकार गठनका लागि माओवादी सामु प्रस्तुत भएको सर्तमध्ये, वाइसीएलको अर्धसैन्य संरचना पनि एक हो । त्यसका लागि माओवादी लचिलो भएको यो भनाईबाट बुझ्न सकिएला । तर संविधान निर्माणजस्तो कुरालाई एकातिर राखेर सरकार निर्माण गर्ने र वाइसीएल अर्धसैन्य संरचना भंग गर्ने कुरा मात्रै गर्नु भने अचम्मको विषय बनेको छ ।
माओवादी, सरकारमा जानका लागि जे गर्न पनि तयार छ भन्नेहरुलाई माओवादी नेताहरुको यो भनाईले सहयोग गर्न खोजेको छ । १२ बुँदे समझदारीमा सवै कुरा सहमतिका आधारमा गर्ने भनिएको दाबी गर्दै प्रचण्डले अहिले काँग्रेस र एमालेले बहुमतीय प्रणाली अपनाउन खोज्दा समस्या बल्झिएको जिकिर समेत गरेका छन् । यसबाट पनि के देखिएको छ भने संविधान निर्माणभन्दा अरु नै कुराहरुलाई माथि राख्न खोजिएको छ ।
प्रचण्डले बैशाख १८ गते राजधानीमा गरिने प्रदर्शनलाई व्यवस्थित गर्न मात्रै युवाहरुलाई स्वयंसेवक तालिम दिइएको तर्क गरेका छन् । त्यसो त देशका तालिमप्राप्त सैनिकहरुले पनि अत्याधुनिक हतियार चलाउन जानेपनि उनीहरुले बाढीग्रस्त क्षेत्रमा पनि उद्धारका काममा खटिन सक्छन् । त्यसैले प्रचण्डले भन्न खोजेको, अहिले तालिम दिएको सभाका लागि हुनसक्छ, तर उस्तै परे मान्छेका टाउका फुटाउन पनि हुनसक्छ ।
वाइसीएलको अर्धसैनिक संरचना भंग गर्ने कुरा सुनेर काँग्रेस र एमालेका नेताहरु निकै खुशी भएका होलान् । तर सरकारको नेतृत्वको कुरा गर्दा भने उनीहरुको मन चसक्क भएको होला । हुन पनि किन नहोस्, आफ्नै हातमा रहेको डाडु पनियो अरुलाई दिनु पनि कम पीडाको कुरो होला र । बरु यो सर्तलाई कसरी मान्ने वा अरु सर्त पुरा गराउनेतर्फ काँग्रेस एमालेका नेताहरुको ध्यान जाने हो कि, कुर्सीमै टाँसिएर समय बिताउने प्रयास हुने हो, हेर्न बाँकी छ । -महेन्द्र ।
Filed under: politics ( 173 ) - NepalHorizons
सरकार र माओवादी भिडन्तको मुडमा
हातमा बन्दुक र अगाडि पछाडि लडाका भएपछि के सरकारमा भएका मन्त्री र नेताहरु हुन् के सरकारबाहिर रहेका दल वा समुहका नेताहरु हुन् । यो खालको शक्ति भन्ने कुरा पनि विध्वंश मच्चाउने नै हुन्छ । यही भएर त होला, दश वर्ष युद्ध लडेर नपुगेर अहिले शान्ति सम्झौता गरिसकेर पनि फेरि लडाइँको तयारी गर्दैछन् लडाकाहरु । लडाका त के भनौं र, बिचरा उनीहरु त आफ्नो पेटका लागि पनि भनेको मान्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।
बरु गल्ती त गृहमन्त्रालयमा अनि प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा ठुलै संख्यामा लडाका पालेका दलका नेताहरुकै छ । पछिल्लो उदाहरणका रुपमा सरकारमा तर्फबाट प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नै लडाकु हुन् । उनीहरुकै निर्देशनअनुसार काम भइरहेका छन्, त्यो पनि मुठभेडको तयारीका लागि । प्रधानमन्त्रीका पछाडि वैधानिक सेना, प्रहरी, अनुसन्धानका अधिकारीहरु हजारौंको संख्यामा छन् ।
प्रचण्डका पछाडि भने केही कम लडाका भएपनि ताजा तालिमप्राप्त लडाकुहरु छन् । तर कोही भन्दा कोही कम छैनन् भन्ने उदाहरण दिइसकेका छन् । सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठक पटकपटक बसेर भनिरहेका छन् कि, माओवादीको आन्दोलनका अगाडि झुक्ने कुरै छैन । सुरक्षाका सबै संयन्त्र परिचालित गरिन्छ । यसको मतलब भिडन्तको अवस्था निम्त्याएर संकटकाल लगाउने अनि त्यही नाउँमा संविधानसभाको म्याद बढाउने प्रपञ्च गरिएको त होइन ?
निहुँ माओवादीलाई सरकार चाहिएको, सत्ताधारी दलहरुलाई वैधानिकता पाउनका लागि त्यस्तै अवस्था चाहिएको । सर्वसाधारण जनताले भने मौलिक हकको निलम्बन, दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव, सञ्चारमाध्यमले स्वतन्त्रता गुमाउनुपर्ने अवस्था, चेकजाँचका नाममा सर्वसाधारणलाई सास्ती । देश बनाउँछु भनेर कसम खाएका दलका नेताहरुले गर्न चाहिं के खोजेका हुन् टाउकेहरुलाई नै थाहा होला ।
सरकारले पछिल्लो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ, मे एकबाट सुरु हुने आन्दोलनको परिणामको जिम्मेवारी माओवादीले नै लिनुपर्ने छ । उता माओवादीका नेताहरुले पनि सरकारले गर्ने कारबाहीको कडा प्रतिकार गर्ने बताइसकेका छन् । जर्बजस्ती चन्दा उठाउन थालिसकिएको छ भने गाउँगाउँमा लडाकु तालिम त छँदैछन् । त्यतिमात्र होइन, एमाले र माओवादी पार्टीका कार्यकर्ताबीचको विवाद को पछिल्लो परिणाम स्वरुप एमाले युवा संघले सेनाका अधिकारीहरुसँग भेटेर अर्को फोर्सको तयारी गरिरहेका छन् । वास्तवमा यो भिडन्तको तयारी नभएर के होला ? तर तल्लो तहका सेनाप्रहरी र माओवादी लडाकु दस्तालाई लडाएर रमिता हुनुभन्दा माधव नेपाल र प्रचण्डलाई रेस्लिङ रिङमा उतार्ने पो हो कि । -महेन्द्र । तस्वीरमा, एक विरोध कार्यक्रम ।
April 19, 2010 7:03 am
झन् बल्झिने संकेततर्फ सेना विवाद
नेपाली सेनाले प्राविधिकतर्फ खाली रहेका स्थानको पदपूर्तिका लागि भर्ना खोलेकोमा एकीकृत माओवादीले विरोध जनाएको छ । सेनाले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २ सय ६८ जना प्राविधिकहरुको भर्नाका लागि आहृवान गरेको छ । माओवादीले भने सेनाले शान्ति सम्झौता विपरित भएको भन्दै विरोध जनाएको हो ।
विरोध पनि सामान्य खालको अभिव्यत्तिः दिएर हुने खालको छैन, एकीकृत माओवादीका सैन्य विभाग प्रमुख वर्षमान पुनले नेपाली सेनामा भर्ना आहृवान गरिनुलाई शान्ति र संविधान विरुद्धको हर्कतको संज्ञा दिए । संचारमाध्यमसँग बोल्न नपाइने भन्ने त भएन, तैपनि यस विषयमा अनेकपटक प्रदर्शन र विरोध गर्ने माओवादी पार्टीका नेताले यस विषयलाई यसपटक पनि तातो बनाउन खोजे ।
यसअघि पनि सैन्य भर्नाका विषयमा माओवादीहरुले सडक प्रदर्शन गर्ने गरेका थिए । विवाद कहाँनेर छ भने, माओवादीले भर्ना गर्नै हुन्न भन्ने, सेनाले भर्ना नभएर खाली भएका पदपुर्ति गरेको मात्र भन्ने । यो विवादलाई हेर्दा त शान्ति सम्झौतामै त्रुटि भएछ कि भन्ने परेजस्तो छ । सेनाको सूचनामा शान्ति सम्झौता हुंदाको बखत कायम रहेको दरबन्दीको संख्या बराबरको पदपुर्तिका लागि भर्ना खोलिएको उल्लेख छ ।
माओवादीलाई पनि आरोप लाग्ने गरेको छ कि, देशका विभिन्न ठाउँमा लडाकु भर्ना गरिएको छ भनेर । त्यसको प्रतिवादमा माओवादी नेताहरुले भने विभिन्न जिल्लामा माओवादीले भर्ना र तालिम सञ्चालन गरेको भन्ने समाचार प्रचारबाजीमात्रै भएको बताउँछन् । समाचार माध्यमहरुमा फोटोसहितको समाचार आएपछि पनि जनतालाई मुर्ख बनाउन खोज्ने ?
त्यसो त रक्षामन्त्री कहाँ छन् र, उनले एकीकृत माओवादीले निर्णायक आन्दोलनका नाममा देशभर संचालन गरेको सैनिक तालिमले वृहत शान्ति सम्झौताको उल्लंघन गरेको बताइन् । आखिर आरोप न हो, राजनीतिमा, माओवादीलाई सरकारले, सरकारले माओवादीलाई ।सेनामा रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्न भर्ना खोलिएको र यो सामान्य र नियमित प्रक्रिया भएको मन्त्री भण्डारीको बताइन् । कस्को भर्ना सही भनेर सर्वोच्चमा मुद्दा पनि परेको छ क्यारे, अदालतले पो के निर्णय गर्ने हो । - महेन्द्र । तस्वीरमा, माओवादीको संविधानसभा दलको बैठक ।
April 15, 2010 5:36 am
जब समय ढल्किन्छ, तब हुन्छ हतार
महेन्द्र रायमाझी -
जेठ १४ गते संविधान जारी हुने संभावना समाप्त हुँदै गएको निष्कर्ष भित्र भित्र निकाले पनि त्यसबारे बाहिर चुप लाग्ने दलका नेताहरु पछिल्लो समयमा भने निकै सरिफ देखिन खोज्छन् । यसैको परिणाम हुनुपर्छ, कि दलका नेताहरु पछिल्लो समयमा आएर समयमै संविधान नबन्ने भनेर गर्वका साथ भन्न खोजिरहेका छन् । भन्नलाई त भनिन्छ, नयां संविधान जारी नहुंदा पर्नसक्ने प्रभावको आाकलन गरी दलहरुले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी शुरु गरेका हुन् ।
दलहरुको काम नै यस्तै भएको छ कि, संकटको पहिल्यै आँकलन गरेर काम नगर्ने तर जब समय घर्किदै जान्छ, तब समय नै नभएजस्तो गर्ने । असहमति हटाउन समय त पर्याप्त थियो नि, तर समय हुँदासम्म केही गरेनन् । अनि समय सकिएपछि हतार गरेजस्तो गरेर झारा टार्ने काम हुन्छ । मुलुकभरि उदघाटन र भाषण गर्दै हिंड्न सक्ने दलका नेताहरुलाई एकै ठाउँमा बसेर समाधान खोज्ने बुद्धि किन पलाएन ।
अब प्रश्न उठ्छ कि, यत्रो समयमा त सहमति हुन नसकेको विषयमा अब कति समयमा सहमति गर्न सक्लान् दलहरु । आखिर हालको समयमा लचकदार हुन नसक्ने पछि जादु भयो भने त मान्नैपर्ला, होइन भने यस्तै विवाद नै विवाद त होला नि । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा सभासद्हरु जेठ १४ गतेभित्र संविधान जारी हुन नसक्नेमा एकमत देखिएका छन् रे ।
एकीकृत माओवादीको पोलिटब्यूरो बैठकमा पनि जेठ १४ गते संविधान जारी नभएपछिको विकल्पका बारे छलफल भएको छ । यसो नहुँदा र उसो नहुँदाको अवस्थामा के गर्ने भन्नेमा योजना बनाउन सजिलो होला । तर कार्यान्वयन गर्ने पो कसरी होला र खै । शीर्ष नेताहरु नै मुख खुलाउन थाले । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले जेठ १४ गते भित्र कुनै पनि हालतमा संविधान नबन्ने घोषणा गर्न सम्म भ्याए । संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्ग पनि के कम । एउटै पार्टीका भएर हो कि, समयमै संविधान जारी हुनेमा आशंका व्यक्त गर्न थालेको सभाध्यक्षले पनि ।
यो सुरुवात मात्र हो, अब बोल्छन् नेताहरु, प्रत्येक उदघाटन कार्यक्रममा हालसम्म संविधान समयमै बन्छ भन्ने उनीहरुको एजेण्डा थियो भने अब बन्दैन भन्नलाई होडबाजी चल्छ । त्यसो त निकै विद्धान ठान्ने सरकारका मन्त्रीहरुले सत्ताको मातमा संविधान समयमै संविधान बन्दैन भन्न थालिसकेका थिए । खनालको भनाई रोचक देखिन्छ, उनले समयमै संविधान बन्छ भन्नु ढाँट्नु हो भनेका छन् । जनताले त अघि नै बुझिसकेका थिए कि, समयमै दलहरुले काम गर्दैनन् भनेर । अहिले आएर उनले पनि नक्कली कुरा गर्न खोजे । राजनीति न हो । तस्वीरमा, एमाले अध्यक्ष खनाल ।
April 14, 2010 6:50 am
नेपालीको सुरक्षा भारतीयले गर्नुपर्ने रे
April 12, 2010 8:00 am
बजारमा नयाँ सरकारको चर्चा
बजारमा जताततै हल्ला चल्ने गरेको छ कि, प्रधानमन्त्री माधव नेपालले छिटै राजिनामा दिने अरे । हुनपनि प्रधानमन्त्रीले मुड बनाएका छन् अरे, राजिनामा दिने भनेर । त्यही भन्दै समाचार बनेनन् कि, विश्लेषकले विश्लेषण गरेनन् कि, माओवादी पार्टीका नेताहरु खुशी भएनन् कि । एकीकृत माओवादीका नेताहरु त निकै खुशी भए, जब प्रधानमन्त्रीले भारतमा विद्युतीय पासपोर्ट छाप्न दिने विषयमा आफ्नो निर्णय फिर्ता लिए ।
यही भन्दै वर्तमान सरकार विघटन गरी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने अभियानमा जुटेको एकीकृत माओवादीकोस्थायी समिति बैठक बसेको छ । स्थायी समितिमा मात्र हो र, दिनभर हुने जति फोरम छन् तिनमा माओवादीका नेताहरु निश्चिन्त के हुने गरेका छन् भने सरकार त अब आउने नै भयो । माओवादी र सरकारको अन्तरनिहित सम्बन्धबारे धेरै व्यंग्य गरेको कारण पनि माओवादीले सरकारमा जान चाहेको ढिपी नै हुनुपर्छ शायद ।
सरकार नै ढल्ने निश्चित भएपछि त, सकेसम्म साना दलहरुलाई साथ लिएर सरकार विरुद्ध बहुमत पुर्‍याउने र त्यसो हुन नसके सडक आन्दोलन मार्फ्त नै सरकार अपदस्थ गर्ने विषयमा नेताहरु छलफलमा बस्न थालिसके । वास्तवमा माओवादीले खोजेजस्तै सरकारले भारतलाई पासपोर्ट छाप्न दिने निर्णय फिर्ता लिएको छ । भारतबाट फिर्ता गर्ने आँट गर्ने भएपछि माधव नेपाललाई सरकारमै भारतले कति पो टिकाउने होला र, यही निक्र्योल गरेको हुनुपर्छ माओवादीले ।
जे भएपनि भारतको आशीवार्द चाहिन्छ भन्ने धेरै छन् यो देशमा, खुबै स्वाभिमानको कुरा गर्ने माओवादीले पनि भारतकै मुख ताकेर न भनेको छ, सरकार परिवर्तन हुन्छ भनेर । बरु सरकारमा नेतृत्व कस्ले लिने भन्ने लडामती पो बढ्ला जस्तो छ अब । गोली मार संविधान निर्माणका काम, त्यही शैली अपनाइरहेका छन् अधिकांश दलहरु । सत्ताकेन्द्रीत कुरा गरिरहँदा त्यही झल्को दिन्छ, उनीहरुको भनाईले । सरकारबाहेकको त कुरै छैन बा ।
माओवादीका सचिव सीपी गजुरेलले दुई चारदिन भित्रै माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्ने दाबी गर्न थालिसकेका छन् । बर्तमान सरकारको अस्तित्व नै नरहेको र संविधानसभाको माग पनि माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने भएको उनको अकाट्य भनाई छ । एमआरपी त ढल्यो, ढल्यो, अब सरकारको पालो भनेर ढुक्क हुनसक्छन् माओवादीहरु । त्यही हेरेर बस्ने अन्य दल र स्वयं माओवादीले समयमै संविधान नबन्दा जवाफ पो के दिने हुन् । ढाँट्ने त होलान् नि । तस्वीरमा, पर्यटनमन्त्री शरदसिंह भण्डारी ।
जसले बनायो उनैले मागे राजिनामा
एमाले संसदीय दलमा सभासदहरुले आफ्ना वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएर राष्ट्रिय सहमतिका लागि बाटो खोल्नुपर्ने माग गरेका छन् । सरकार टिकाइराख्नका लागि अन्य दलसँग छलफल चलाइरहेका प्रधानमन्त्रीका आफ्नै पार्टीका सभासदले राजिनामाका लागि दबाब दिंदा कम्ती चित्त दुख्दो हो र । के गर्ने पक्षमा आफ्ना मान्छे भएपनि विपक्षले नटेरेपछि जति नै पावर लगाएपनि कस्को के लाग्दो रहेछ र ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री बन्दादेखि नै नेपालविरुद्ध बोल्ने सभासदहरुको संख्या ठुलै थियो । खासगरी संस्थापन पक्षकै । शायद त्यही बोलीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि विभिन्न समयमा त्याग र तपस्याको लागि तयार हुनुपर्छ भनेका, सरकार परिवर्तनमार्फत । फसाद त तब पर्‍यो जब प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नैतिक दबाब मात्र होइन, हस्ताक्षर अभियान नै चलाउन थाले । हेर, केही महिनाअघि बहुमत पुर्‍याउन हिंडेका प्रधानमन्त्रीको चाला ।
नेपाल पक्षधर नेताहरुले नै माओवादीका नेताहरुलाई वैधानिक, प्रक्रिया पुर्‍याएर जस्ता विशेषणको प्रयोग गर्दै बहुमत जुटाउन दबाब दिइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा एमाले भित्रै यो अवस्था आउनु पो रोचक विषय बन्न पुगेको छ । केही समयअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा नगएर भएपनि आफ्ना काममा व्यस्त हुने तथा संविधान निर्माणका केन्द्रीत हुने भनेर कसम खाएका प्रधानमन्त्री देखि अन्य मन्त्रीको प्रण अब भने खेर जाने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ, सरकार परिवर्तनको रन्कोका कारणले ।
जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको विरोध हुनुको कारणको कुरा छ । के मन्त्री हुन नपाएको झोंक, के एमआरपी काण्ड त के संविधान निर्माणको निहुँ । संविधान निर्माणको निहुँ किन भनिएको भने, संविधान निर्माणका लागि सरकार नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने भनाई निहित स्वार्थपूर्ण रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । हो सरकारमा बस्न लायक व्यक्तिहरुको मन्त्रिपरिषदमा उपस्थिति भएर अहिलेको आलोचना हुने अवस्था आएको भन्ने पनि छन्, तर सुत्केरीको नाउँमा कुखुराको टाउको मैले खायाँ भनेजस्तै हो यो कुरा ।
त्यसो त एमआरपी छपाईको विषयमा प्रधानमन्त्रीले लेखा समितिमा दिएको अभिव्यक्ति पनि र्‍याडिकल नेस्नालिज्ममा आधारित भएर आएको होइन नि । बरु यो त कुटनीतिक तथा राजनीतिक अर्थात सरकारप्रतिको समर्थन आइराख्ला भन्ने आशै आशामा गरिएको निर्णय थियो । यो सँगै नयाँ पासपोर्ट वितरणका लागि समय घर्किसकेको कारण त छँदै थियो । पछिल्लो विकल्प प्रधानमन्त्रीका लागि सही भएपनि अघिल्ला अभिव्यक्ति त ढाँट्न खोजिएजस्ता थिए । त्यसैको परिणाम पो हो कि अहिलेको आलोचना । तस्वीरमा, एमआरपी काण्डाबारे लेखा समितिमा प्रधानमन्त्री ।
April 08, 2010 6:35 am
गोप्य सम्झौता भएको खुलासा
राजनीति गर्न खप्पिस छन् अधिकांश नेता । त्यही भएर गोप्य, कुटिल, नियोजित, विदेशी हस्तक्षेप जस्ता शब्द पत्रपत्रिकाले थाम्नै नसकिने तरिकाले व्यक्त हुन्छन् । त्यसो त राजनीतिमा कुटनीति हुन्छ, खुला र भित्री रुपमा गरिने क्रियाकलाप सञ्चारमाध्यममा आउँदा रोचक हुने नै भयो । यही बीचमा खुलासा नै गर्ने तरिकाले राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले संविधानसभाको म्याद थप्न टूला तीन दलले गोप्य सम्झौता गरिसकेकेा दावी गरिदिएका छन् ।
राजनीतिमा वरिष्ठ, स्पष्टवक्ता थापाले एकीकृत माओवादीको जनविद्रोह र काँग्रेस-एमालेको सत्ता टिकाउने खेल सुनियोजित भएको आरोप लगाइदिए । जेठ १४ मा नयां संविधान जारी नभए पुनः अर्को जनआदेश लिनुपर्ने र नयाँ चुनाव हुनुपर्ने थापाले भनाई राखे । उनको आफ्नो ठाउँबाट यो भनाई पनि ठिकै छ । 'संविधान समयमै बन्छ भन्ने दलहरुको सहमति छिटै खुलासा हुनसक्छ ।' थापाको भनाई सुनेपछि तीन ठुला दलका नेताहरुमा तरंग छाउँछ । अवश्य पनि ।
'कसरी थाहा पाएछन्, थापाले', काँग्रेसका विश्लेषक नेताले भने । छेउमै बसेका निकै अध्ययन गर्ने एमालेका नेताले भने, 'कसरी थाहा पाएछन् नभन्नुस् न, अचम्म मानेजस्तो गर्नुस् ।' सत्तामा बसेका दुई दलका नेताको कुराकानी माओवादी नेतालाई मन परेनछ, सशस्त्र युद्धमा समेत सक्रिय भएका माओवादी नेताले प्रत्युत्तर दिए, 'कसरी प्रमाणित गर्दारहेछन्, त्यो पनि हेरौंला ।' जेठ चौध आउन धेरै समय बाँकी नरहेको अवस्थामा थापाको प्रमाणित गर्नुपर्ने आफैंले हो कि भन्ने चिन्ता सहित माओवादी नेताले थपे, 'सकेसम्म छिटो प्रमाण जुटाउनुपर्छ उनले ।'
'शाहीकालमा मन्त्री पद खाने बानी परेपछि सत्तामा देखी नसहेका हुन् तिनले हामीलाई' काँग्रेस र एमालेका नेताले एकैस्वरमा भने । माओवादी नेताले भने, 'संविधानसभामा माओवादीले पाएको यत्रो जनमतको कदर नगरीकन हाम्रो गौरवशाली पार्टीलाई बदनाम गराउने चाल राम्ररी बुझेका छौं ।' चालीस नाघेका, समयसमयमा सञ्चारमाध्यममा छाइरहनुपर्ने नेताले गाँठी कुरो पत्ता नलगाइकन कसरी मुखारविन्द गरेका होलान् भनेर सर्वसाधारण समेत अचम्भित भएको देखेर तीन दलका नेतालाई पो अप्ठेरो परेको छ ।
'जस्ले जे भनेपनि गोप्य सम्झौताको कुरो झुट हो, यो भनाईप्रति हाम्रो असहमति छ ।' तीनै दलका नेताले एकैस्वरमा भने । तीन दलको पुनः प्रतिबद्धता सुनेर कमल थापा पक्षधर एक नेताले पनि भनिदिइहाले, 'हेरम् डेढ महिना भन्दा केही दिन बढी समयको अवधिमा कसरी बनाउँदा रहेछन् ।' समय गुजि्रदै गरेको हुन्छ, राप्रपा नेपालका नेता खुलासा गर्ने धुनमा अनि ठुला दल प्रतिरक्षा गर्नेमा समय बिताइरहदा संविधानसभाको म्याद भने घर्किसकेको हुन्छ । सबै जिल्ल ।
April 06, 2010 5:51 am
सुशील दा'को डेरामा सर्दाको अनुभव
काँग्रेस कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला आफू बस्दै आएको बुद्धनगरस्थित घरबाट महाराजगञ्ज सरेका छन् । उनी काँग्रेस सभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला बस्नु भएको घरमा सरेका हुन् । सर्नेवित्तिकै उनले पार्टीको नेतृत्व अब नयाँ पुस्तामा जाने बताएका छन् । पार्टी सभापतिको निधनपछि कार्यकर्ता र आगन्तुकसँगको भेटघाटको क्रम बढेको र आफू बस्दै आएको ठाउँ साँघुरो भएकाले महाराजगञ्ज सर्नु परेको कोइरालाले बताएका छन् ।
बरु अहिलेको समयमा यसरी कोइराला यसरी सर्नुमा भौतिक असुविधा र सुविधाको कुरा भन्दा पनि उनको राजनीतिक दौडधुपका लागि हो कि भन्नेमा शंका गर्न थालिएको छ । यसै त कावा सभापति उसैमा सभापतिको निधन भएपछि अहिले नेतात्रय अर्थात ट्रोइका का अवधारणा अगाडि आएको छ । तर कावा सभापति कोइरालाले संस्थागत अर्थात कावा सभापति नै सभापति हुनुपर्ने अडान देखाउँदै आएका छन् । सोहीअनुसार एक नेताले आह्वान गरेका बैठकमा अर्का नजाने खालको वातावरण पनि सिर्जना भएको छ ।
'म ऊ नभएकोले महाराजगञ्ज सर्नुपरेको हो ।' कावा सभापति कोइरालाले प्रष्ट पार्दै भने । त्यसको अर्थ केही बुझेपनि अलि चतुर कार्यकर्ताले जिज्ञासा राखे र भने, 'यो ऊ भनेको के हो कावा सभापतिज्यू ?' त्यागी नेताको रुपमा पनि चिनिने कोइरालाले उत्तर दिइहाले, 'कार्यकर्तासँगको भेटघाट सजिलो पार्नका लागि सरेको हो । भावी सभापतिको रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गर्न डेरा सरेको भन्ने बुझाई सही होइन, बुझ्ने गर्नुस् है ।'
पत्रकार झुम्मिहालेछन्, कोइराला महाराजगञ्ज आएपछि । 'कावा सभापतिज्यू, यहाँको बसाई कस्तो लाग्यो ?' अन्तरवार्ताको क्रममा उनले भने, 'जिम्मेवारी अलि बढी आएको महसुस भएकोले यता आएको हो, ठीकै छ ।' पत्रकारले क्रस क्वेश्चन गरिहाले, 'पार्टीको नेतृत्वको लागि ठाउँको अर्थ केही होला र ?' कोइराला त रिसाइहाले, तपाईंलाई केको मतलब, तपाईं पार्टीमा कहिल्यै बस्नुभएको छ ?' अब पत्रकार पनि पार्टीको नेतृत्वमा कहिले पुग्थे र ।
पत्रकारसँग उनले १२ औं महाधिवेशनबाट पार्टी नयाँ ढंगले प्रस्तुत हुने दावी गरे । यो पनि शायद महाराजगञ्ज आउनुको पहिलो कोसेली स्वरुप पत्रकारलाई दिइएको ताजा भनाई नै हुनुपर्छ । सम्भवतः अब पार्टीको सभापति पनि आफैं बन्ने हो कि भन्ने आशंकाले प्रश्न आयो, 'अबको नेतृत्व चयनका लागि चुनाव नै हुन्छ कि, सर्वसम्मत हुन्छ, कावा सभापतिज्यू ?' कोइराला यो प्रश्नको उत्तर दिन पनि अन्कनाउँदै थिए । तर पनि भनिहाले, 'त्यो कुरा अहिले म कसरी भन्न सक्छु ?' अन्त्यमा थपिहाले, 'ऊ भएपछि भइहाल्छ नि ।'
April 05, 2010 4:44 am
कालो झण्डा र महादेव दर्शन
उसो त माओवादीका निकै आलोचक उपप्रम तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका मन्त्री विजयकुमार गच्छदार बेलाबेलामा बोलीको गोली मात्रै नभएर साँच्चिकै झडपको कारक बन्छन् । त्यसो त भौतिक योजनामन्त्री झडपको कारक बन्छु भन्ने अनुमान गरेका त थिएनन् होला, तर बने । झडपको मुख्य कारक त माओवादी कार्यकर्ता पनि हुन् जसले कालोझण्डा देखाए अनि देशको उप कार्यकारी प्रमुखलाई मानेनन् ।
गच्छदार मात्र होइन पर्यटनमन्त्री शरतसिंह भण्डारीले पनि कालोझण्डा देख्नुपर्‍यो सबैको सामुन्ने । कम्ती लाज लाग्दो हो र, त्यसरी जनताका सामु कालोझण्डा अनि झडपको स्थिति आउँदा । त्यही भएर पनि हुनसक्छ उपप्रम गच्छदारले माओवादीले आफ्ना लडाकु व्यवस्थापनका लागि भन्दै प्रतिव्यक्ति बीस लाख रुपैयाँ दिनुपर्छ भनेको कुरालाई मान्यता नदिनु । हुन पनि महादेवको दर्शन गर्न जाँदा अवरोध गरेपछि उपप्रधानमन्त्री पनि किन नरिसाउन् र ।
औपचापरिक कार्यक्रममा नजाने भनेर संकेत दिने मन्त्रीहरु बाहिर जानु आफैमा लाजमर्दो कुरा हो । हुनपनि संविधान निर्माणका लागि योग देखि लिएर गरिने सबै ध्यान त्यसैमा केन्दि्रत गर्ने भनिएपनि त्यसबारे योग मात्रै गरिएको जस्तो छ । त्यतिमात्र हो र, उपत्यकाबाहिर गएर आफ्नो काम चुपचाप गरेमात्रै त धेरै आलोचना खप्नुपर्ने थिएन होला नि । बोलिहाल्छन् कि समयमै संविधान बनाउन दश दिन भए पुग्छ ।
विजय गच्छदारले त्यही भने । हुन त कालोझण्डा देखाएको रिसमा के बोलें भन्ने थाहा नपाएर यसो भएको भने त भन्नु केही पनि छैन । तर यसरी बोल्न त काम पनि त्यही अनुसार गरे हुन्थ्यो नि । जाने महादेवको दर्शन गर्न, अनि भन्ने कि दश दिनमै संविधान । त्यसैले पहिले कालोझण्डाको कथा सकाए राम्रो । अर्थात प्रधानमन्त्री र सरकारको नेतृत्व भनेर करकर गरिरहेको प्रतिपक्षी माओवादीलाई सहमत बनाउनु ।
शक्तिको आशा त कस्मा पो नहोला र, दलहरुले बाहिर नभनेपनि करीब एक वर्ष सरकार चलाएर बहुमत, सहमति, असहमति जे भनेर भएपनि पालैपालो गरेको दशकयता त्यही नै हो । कुरो नलुकाइकन, संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया जति जे भनेपनि अब पनि गर्ने त्यही त होला नि । केही दिनयता सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव, गालीगलौज अनि सरकारमै रहेका नेताहरुको चलखेलले त प्रष्टै त्यही देखाएको छ ।
April 01, 2010 7:24 am
आफ्ना जनता फिर्ता गराए राम्रो
March 28, 2010 7:41 am
सरकारको नेतृत्वको कुरो
March 26, 2010 7:09 am
भागबण्डामै तानिए उपकुलपति पनि
March 21, 2010 7:58 am
अन्तिम संस्कारअघि केके भयो राजधानीमा
March 18, 2010 8:03 am
नेताहरुबीच सरकार बनाउने सल्लाह
March 17, 2010 7:25 am
मसिनले पढ्ने भनेपछि त्यसै हुरुक्क
सार्वजनिक कार्यक्रममा नजाने घोषणाको लर्को
March 10, 2010 6:02 am
आदेश मानेर गृहराज्यमन्त्रीको राजिनामा
March 07, 2010 3:14 am
सबैतिरको चेपुवामा गृहप्रशासन
[ First ] [ Prev ] 1 |2|3|4|5|6|7| 8 |9[ Next ] [ Last ] Add New Blog